Warbixin ku Saabsan Xawaaladaha Soomaaliyeed.
Maxaad ka ogtahay wax qabadka ay xawaaladaha u hayaan bulshada Soomaaliyeed?
C/risaaq Cali Adam(jeesteeye)
Sawiradan waa booqashadii xawaalada dalsan
Tan iyo markay burburtay Dowladdii dhexe ee Soomaaliya horaantii 1991, ayaa waxaa si taxadar leh dalka ugu soo badanayay adeegyada muhiimka u ah nolosha dadka. Kuwaas oo dadaal qayb ah ka gaystay badbaadinta Boqolaal Kun oo qof, xilli qaybo badan oo dalka ah ay ka horayeen colaado sokeeye oo qabiil ku salaysan.
Haddaba adeegyadaasi ayaa kuwooda ugu muhiimsan la oran karaa waxaa ka mid ah shirkadaha xawaaladaha lacagaha, kuwaas oo muhimad qotodheer siiyay fududaynta iyo gaarsiinta dadka barakacay lacagaha ay soo diraan eheladooda qorbaha ku nool, maadaama uusan jirin Bank dhexe ee dalku leeyahay.
Haddaba shirkadahaas ayaa waxaa kamid ah shirkadda xawaaladda ee Dalsan oo run ahaantii la’oran karo waxay liiska hore kaga jirtaa shirkaddaha xawilaadaha ee magaca ku leh guduha dalka iyo dibaddaba. Shirkaddan oo lagu amaano dag-dag siinta helista lacagaha, amaano wanaag iyo ballaarinta xarumaha shirkadda ku leedahay dhamaan dagmooyinka iyo inta badan gobolada soomaaliya.
Mar aan samaynay u kuurgal baaxad wayn oo aan ku xaqiijinayno tayada shaqo ee shirkaddan ku leedahay bulsho waynta soomaaliyeed, ayaa mujtamac badani sugayaan in shirkadani ay ku guulaysatay kalasoonida dadka, islamarkaana ay tahay mid higsanayso mustaqbalka dhow rabitaanka isticmaalka dhigashada lacagaha Bangiga Dalsan. Waxayna arrintani si aad ah u dhiiri galisay shirkadaha kale ee Soomaaliyeed inay kaga daydaan Dalsan hormarka shaqo.
Xawaaldda Dalsan waxay haysataa shatiga aqoonsi ee dhigashada lacagaha qalaad , waxayna shaaca ka qaadayaan damaanad qaadka lacagaha Bangiga Dalsan uu qabto.Wuxuuna maamulku si cad u qeexayaa inuu u ballan qaadayo macaamiisha adeeg hufan iyo wax qabad tayo leh.
Maraan booqday xarunta shirkadda Dalsan ku leedahay magaalda Nairobi ee Dalka Kenya ayaa waxaa ii suurto gashay inaan kula kulmo Maareeyaha Guud ee shirkadda Shiikh Maxamed Cusmaan Cigaal oo aan wax ka weydiiyay marka laga soo tago dirista iyo qabashada lacagaha, inay jiraan wax qabad kale oo ay shirkaddu u hayso bulshada Soomaaliyeed. Wuxuu Maareeyaha Guud Shiikh Maxamed ii sheegay in shirkaddu ka qayb qaadato dhismaha baraha ay dhallinta Soomaaliyeed wax ku bartaan sida madarasooyinka, iyo Dugsiyada Quraanka. Wuxuu intaas raaciyay inay shirkaddu gacan ka gaysatay howlo nabadayn ah oo ka socday qaybo katirsan wadanka Soomaaliya, iyada oo xusid mudan inay shirkadda Dalsan ka qayb qaadatay cawinaadda dad aad u fara badan oo ay sameeyeen abaarihii ba’naa ee dhawaan ku dhuftay qaar ka mid ah goboladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin gobolada Sool iyo Sanaag.
Isku soo wada duuduuboo xawaladaha Somaliyeed oo qaarkoodba jiray xiligii ay jirtay dowladii dhexe ee Somaaliya ayaa dada badan oo Somaliyeed kamahad sheegaynayaa iyadoo lagu tilamamo xawaaladaha kuwa dhaqalaha ugu badan soo galiay wadanka Soomaaliya.
Waxaa warbixintaasi soo diyaariyay wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Nairobi-Kenya.
Faafin: SomaliTalk Jan 13, 2003